ဖော်ပြချက်နှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူထိပ်ဆုံး 10: 2019 အတွက် PS4 မှာအများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်း - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
Resident Evil2ဇာတ်ကား
ဝေး Cry: New Dawn
မာရျနတျမေလ Cry 5
Sekiro: Shadows နှစ်ကြိမ် Die
အမေရိကန်၏နောက်ဆုံး: အပိုင်း II ကို
ဖြန့်ချိနေ့စွဲ: ဇန်နဝါရီ 25,
2: ဂျပန်မှာတော့ဂိမ်း Resident Evil2ဇာတ်ကားတစ် Biohazard RE အဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါဖန်တီးသူ "အဟောင်းကျောင်းကို" ၏ဝိညာဉျတျောတစ်ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမြင်နှင့်တစ်ဦး fixed ကင်မရာတည်ထောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတတိယလူတစ်ဦးပိုကောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖွဲ့လုံးက 2018 မှာကျင်းပတဲ့ E3 ပြပွဲတုံ့ပြန်မှုအပြုသဘောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှင့်သော်လည်းအားလုံးမဟုတ်ပရိသတ်တွေ, ဒီမိတ်ဆက်စကားယူကြပြီ။
ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းမှာတော့လူကြိုက်အများဆုံးရှင်သန်မှုထိတ်လန့်ဇာတ်ကားများထဲမှ၏ပရိသတ်များလွှတ်ပေးရန် Resident Evil ၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းအတွက်စီစဉ်ထားသည်။ Leon Kennedy ကနှင့်သူ၏ရံဖန်ရံခါရည်းစားတန်ပြန်ခံစားနေရသူတစ်ဦးအဟောင်းအသိအကျွမ်းကို Claire Redfield တစ်ဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာပျက်၏အလယ်၌ရှိကြ၏။ သငျသညျဌာနေ၏အများဆုံးသင်ယူလိမ့်မည်ဟုကတိပေး Capcom developer များအနေဖြင့်, သို့သော်, အဲဒါကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်ကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည်: ကင်မရာအဓိကဖြစ်ရပ်များဆက်ရေးကြလိမ့်မည်ရှိရာအဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ဦးရဲစခန်းမှာပခုံးနောက်ကွယ်မှတည်ရှိပြီး, က ပို. ပင်ဖှယျနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖြန့်ချိနေ့စွဲ: ဖေဖော်ဝါရီလ 15,
ဂိမ်း Far Cry ၏တရားဝင်ကြေညာချက်: New Dawn ဒီဇင်ဘာလ 2018 ရဲ့အစမှာ Los Angeles မှာအရပျကို ယူ. ,
Far Cry ၏အသစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထပ်ဂိမ်းနှင့်ကြံစည်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှစ်ဦးစလုံးဟာ Ubisoft ၏ပြဿနာနှင့်၎င်းတို့၏ marking အချိန်ပြုစုပျိုးထောင်ကစားသမားတွန်းအားပေးသည်။ ကျနော်တို့ကိုတဖန် Quest များတန်ချိန်နှင့်အတူသြဇာလူကြမ်းအဖြစ်ပွင့်လင်းကမ္ဘာနှင့်တစ်ဦးတိုက်မိခြင်းနှင့်တည်နေရာအမျိုးမျိုးကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ဂိမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Far Cry ၏ဇာတ်သိမ်းတော်လှန်ရေးသမား 5. အဘယ်အရာကိုမျှမျှော်မှန်းထားရပါမည်ကတည်းကစီမံကိန်းများ၏ကြံစည်မှု 17 နှစ်ပြီးနောက် Post-Apocalyptic America မှာဖွံ့ဖြိုးဆဲအဖြစ်အပျက်မှကစားသမားများလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သာ New Dawn အနည်းဆုံးတစ်နေရာရာမှာနယူးဖွစျလိမျ့မညျဟုမြျှောလငျ့နိုငျသညျ။
ဖြန့်ချိနေ့စွဲ: ဖေဖော်ဝါရီလ 22,
Metro: ရုရှားနိုင်ငံတွင်ထှကျမွောကျရာက Metro အဖြစ်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်: ထှကျမွောကျရာ
ကို Dmitry Glukhov ၏ပရိသတ်များဝဠာ "Metro" ၏စာရေးဆရာများ၏အကျင့်ကိုကျင့်၏ဂိမ်းလိုက်လျောညီထွေနှင့်အတူလာမည့်အစည်းအဝေးတွင်တပ်မက်။ အဆိုပါထှကျမွောကျရာ၏အသစ်အစိတ်အပိုင်းကစားသမားတစ်ဦး Post-Apocalyptic ရုရှားပြည်နယ်မြို့ကြီးများမှတဆငျ့ခရီးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အများစုမှာနေရာများတွင်ယခုအခါပွင့်လင်းနေရာများနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်, နှင့်လေကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံသောကွောငျ့ဇာတ်ကောင်, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများများအတွက်ဖျောက်ရန်မလိုပါ။
E3 2017 ပြပွဲမှာ Metro ထှကျမွောကျရာ Premiere ကစားသမားအများစုများအတွက်အံ့သြစရာအဖြစ်သညျ လာ. နှင့်အထွေထွေကြေညာချက်ထဲမှာဂိမ်းအပြုသဘောရှုမြင်ကြသည်ခဲ့သည်။ သတင်းစာ The Daily Telegraph ကနေတွမ် Hoggins, တစ်ခုလုံးပြပွဲ "ကိုအများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်ကြေညာချက်များ" ၏တက Metro ထှကျမွောကျရာကိုခေါ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, PC World မဂ္ဂဇင်းတင်ဆက်ထိပ်တဆယ်ကို PC ဂိမ်းထဲမှာဒုတိယနေရာသို့ Metro ထှကျမွောကျရာ ထား. , က Wired မဂ္ဂဇင်းဂိမ်းကိုအကောင်းဆုံးအထူးအသားပေးတဦးအဘို့နောက်တွဲယာဉ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
ဖြန့်ချိနေ့စွဲ: ဧပြီ 23,
ဇန်နဝါရီလလယ်များတွင်လာမည့် meropiyatiyah အပေါ်နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို 2019 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်
အကောင်းဆုံးကိုတိုက်ပွဲများဂိမ်းများကိုတစျဦး၏ output ကိုဒီနှစ် Mortal Kombat ဝဠာအများအပြားပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထား။ ဒသမတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနွေဦးအတွက် PS4ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိ developer များလာမည့်စီမံကိန်းတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များဝေမျှကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးထွက်ပေါက်အံ့မခန်း combo, အကြမ်းဖက်မှုများ၏မျှတသောပမာဏနှင့်စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိ၎င်း၏အသွင်အပြင်၏တိုတောင်းသောကျဆင်းသောအနည်းဆုံးနှစ်လိုဖွယ် microtransactions, စာရေးနှင့်အတူပြောင်းလဲနေသောတိုက်ပွဲများဂိမ်းပြင်ဆင်နေကြောင်းဒါရှင်းပါတယ်။
ဖြန့်ချိနေ့စွဲ: မတ်လ 8,
အရေးယူဂိမ်းမာရျနတျမေလ Cry54 အစိတ်အပိုင်းများပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွား
မာရျနတျမေလ Cry ခဲသည်ဟာရီကိန်းတုတ်ဓားများအသစ်အစိတ်အပိုင်းအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုခုကိုယူဆောင်လာလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် adrenaline နှင့်အရူးလုပ်ဆောင်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ပေးဝေကျူးလွန်နေသည်ထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့။ Dante နဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်နီရိုကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နှင့်အခြားကမ်ဘာပျေါတှငျနတျဆိုးအပြင်းအထန်အသက်။ ကျနော်တို့တစ်ဖန်ယင်းသေစေနိုင်သောဓါးသွားလွှဲမြောက်မြားစွာ combo ထုတ်ပေးရန်နှင့်ပြိုင်ဘက်များ၏အလေ့အထသင်ယူဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒဏ္ဍာရီတုတ်ဓားကဒီနွေဦးပြန်လည်ရောက်ရှိ!
ဖြန့်ချိနေ့စွဲ: မတ်လ 22,
Sekiro: Shadows နှစ်ကြိမ် Die - ကို "စစ်မက်ပြည်နယ်၏ခေတ်" မှာပဒေသရာဇ်ဂျပန်တွင်ရာအရပ်ကိုကြာသည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု,
မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် စိုးရိမ်. နှင့်အတူစောင့်ဆိုင်းနာမည်ကြီးအမှောင်ဝိညာဉ်နှင့်တကွ Bloodborne ၏ရေးသားသူထံမှစီမံကိန်း။ အဘယ်သူမျှမသေးသူ့ဟာသူ Sekiro ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။ hardcore အရေးယူဂျပန်စတူဒီယို setting ကိုနှင့်သွားတာ၏အမျိုးမျိုးအပေါ်တစ်ဦးအာရုံစိုက်နေဖြင့်ယခင်အလုပ်ကနေကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါကစားသမားကိုသူပွင့်လင်းအတွက်ရန်သူနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းငှါလိုလားခြင်းရှိမရှိရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်မသိမသာလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ အဆုံးစွန်သောနည်းလမ်းအဘို့, ဂိမ်းထဲမှာဖြတ်သန်းတောင်ပေါ်နှင့်အသစ်လမ်းကြောင်းများအဘို့အရှာဖွေရေးများအတွက်စီမံချက်များကိုတက်ခွင့်ပြုတဲ့ချိတ်-ကြောင်ကဆက်ပြောသည်။
ကြှနျုပျတို့ကို၏မူလနောက်ဆုံး၏ပရိသတ်များ 2019 အကောင်းဆုံးစွန့်စားမှု survayvl မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတစ်ဦးမှတစ်ဦးရုံတင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဆိုးခွေးကနေ developer များရှိပြီးသားဂိမ်းသရုပ်ပြအများပြည်သူအနည်းငယ်အမြည်းနဲ့ဗီဒီယိုမှတင်ဆက်ဖို့စီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ မူရင်း၏ဇာတ်သိမ်းပြီးနောက်ရှေ့ဆက်ငါးနှစ်အပေါ်ကစားသမားရွှေ့ဖို့သစ်ကိုကတိတော်များ၏ကြံစည်မှု။ ကမ္ဘာကြီးကိုအခွအေနေကိုပြောင်းလဲမထားပါဘူး: ဖုတ်ကောင်, အရင်းအမြစ်များအဘို့အစစ်, တစ်လောကလုံးမတရားမှုနှင့်ရက်စက်မှုဆန့်ကျင်နေဆဲအတူတူပင်ရန်ပွဲ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီနှစ်လွှတ်ပေးရန်ဖို့သီးသန့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာအကောင်းဆုံးအခိုက်အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖြန့်ချိနေ့စွဲ: ဧပြီ 26,
Gone ဂိမ်းနေ့ရက်များတစ်ဦးကို upgrade လုပ်ဖို့ကိရိယာအမျိုးမျိုး, ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သုတေသနတို့အတွက်ပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ထောင်ချောက်များနှင့်လက်နက်များဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်
တစ်ဦးဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအနည်းငယ်သီးသန့်တစ်ဦးလည်း postapokalipsisa ၏ setting ကိုအတွက်အမျိုးအစား survayvl-action ကို၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ နေ့ရက်များအတွက် Gone developer များ Sie ကွေးစတူဒီယိုတစ်ခုခက်ခဲတဲ့ biker ဇာတ်ကောင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးတက်လာဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စနစ်နှင့် Uncharted အဆင့်အထိကိုကြီးစွာသောဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ကမ္ဘာကြီးပြင်ဆင်ကြပြီ။ အနည်းဆုံးဒါကြောင့်ဂိမ်းရဲ့ဖန်တီးရှင်ကဆိုသည်။ တကယ်ကဘာလဲ? မကြာခင်မှာပဲထွက်ရှာပါ။
ဂိမ်းအိပ်မက်များလွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲသို့သော်ပထမဦးဆုံးပြည်သူပိုင်စမ်းသပ်မှုအပေါ်စံချိန်ဇန်နဝါရီလ 21, 2019 သည်အထိကြာရှည်မည်, မသိရသေးပေ
အဆိုပါ sandbox 'အမျိုးအစားအိပ်မက်များအတွက်အများဆုံးမျှော်လင့် Premier တစ်ခုမှာဗီဒီယိုဂိမ်းအတွက်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏ဆောင်ပုဒ်အပေါ်ကစားသမားအမြင်များမှောက်လှန်။ မီဒီယာမော်လီကျူးစတူဒီယို၏ကိုယ်စားလှယ်များအသိအမှတ်ပြုရန်မိမိတို့အ sandbox 'ဂိမ်းဒီဇိုင်းနှင့်ဂိမ်းအတွက်တော်လှန်ရေးဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမည်သို့: အစီမံကိန်းသည် PlayStation Move တို့ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ကစားသမားများကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အဆင့်ဆင့် generate, အခြေအနေတွေဖန်တီးဖို့နဲ့အခြားကစားသမားများနှင့်အတူသူတို့ကိုမျှဝေဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် beta ကိုစမ်းသပ်အိပ်မက်များ၏အတိတ်သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ရွှေ့ဆိုင်း။ အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ? အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသူတို့နပိုလီယံကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် developer များ, သူတို့ပြီးပြီလိုချင်တာတွေနားလည်သဘောပေါက်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။
ဖြန့်ချိနေ့စွဲ: မေလ 14
ဒေါသ2ဖွံ့ဖြိုးရေးပူးတွဲစတူဒီယိုအိုင်ဒီ Software များနှင့်ဆွီဒင် Avalanche စတူဒီယို၌တည်ရှိ၏
ပထမဦးဆုံးအ Borderlands ၏ stylist ဆင်တူသေနတ်သမား Rage တစ်ခုခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ကျောက်ကို Simulator ကိုတူသောဂိမ်း။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အလားအလာရှိခဲ့နှင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုလက်ရာဖြစ်လာဖို့ရာစီမံကိန်း, Arcade ပြိုင်ကားအတူမှိုင်းခြင်းနှင့်စရိုက်သေနတ်သမားသည်ထင်ရှားကြောင်းထွက်လှည့်။ ဩစိတ်ပျက်စေဂိမ်းကစားအမျက်ဒေါသ, သို့သော်, 2019 ထဲမှာနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာပျော်စရာဂိမ်းနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားအတူရောင်စုံနှင့်ပြောင်းလဲနေသောသေနတ်သမားကတိပေး။ မူလ developer များ၏အမှားများကိုပြန်လုပ်မဟုတ်လော ကျနော်တို့မေလအလယ်၌သင်ယူကြသည်။
PlayStation4ကစားသမားများနှင့်ပရိသတ်များစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်ကောင်, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဖြစ်အပျက်များနှင့်အေးမြဂိမ်းနှင့်ပြည့်စုံက virtual world တစ်ခုမမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်ဘို့အလိုငှါလူအပေါင်းတို့သည်အခမဲ့အချိန်ယူမှကတိပေးကြောင်းအေးမြစီမံကိန်းများလွှတ်ပေးရန်စောင့်ဆိုင်းလိမ့်မယ်။ ယခုနှစ်ဆယ်ပါးအများဆုံးလိုချင်သောဂိမ်းတစ်ခုသံသယမရှိဘဲ, ရပ်ရွာများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နှင့် Premiere ဝန်းကျင်ဖောင်းပွတရားမျှတရန်။
ဗီဒီယို Watch: Unrealistic Noob VS. Realistic Pro Game-play - Farming Simulator 2017 Mods (အောက်တိုဘာလ 2019).